Muslimiinta Waddanka Shiinaha oo loo diiday Gudashada Waajibaadka Soonka Bisha Ramadaan - Somaliland Post
Home News Muslimiinta Waddanka Shiinaha oo loo diiday Gudashada Waajibaadka Soonka Bisha Ramadaan
Muslimiinta Waddanka Shiinaha oo loo diiday Gudashada Waajibaadka Soonka Bisha Ramadaan
China (SLpost)- Dawladda Shiinaha, ayaa qoomiyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalweynaha shiinaha, gaar ahaan qoomiyadda Uyghur oo ku nool Gobolka Xinjiang, ka horjoogsatay inay gutaan waajibka soonka ah ee Ilaahay (SWT) ku waajibiyey.
Qoomiyadda muslimka ah ee Uyghur oo tiradooda lagu qiyaaso ilaa 8.68 milyan oo qof, kuna nool gobol ku yaal xadka dalka Shiinuhu la leeyahy waddamada Mangolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan iyo Hindiya, kaas oo ah gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu tiradan badan dalka Shiinaha oo guud ahaan lagu qiyaaso ilaa 12 milyan oo qof.
Sida lagu baahiyey wakaaladaha caalamiga ah ee wararka oo, amar ka soo baxay dawladda Shiinaha, ayaa lagu sheegay in aan laga soomi karin degaanka muslimiintu ku nool yihiin, iyadoo lagu amray ardayda, shaqaalaha dawladda iyo macalimiinta aanay cuntada ka soomi karin, waxaana hudheelada ku yaal degaanka la faray inay shaqeeyaan, cuntooyinka kala duwana sameeyaan, isla markaana cid sooman aan laga arki karin, waxaanna la amray in xoog cuntada lagu siiyo qof kasta oo la arko inuu sooman yahay.
“Goobaha cuntada lagu kariyo si caadi ah ayey u shaqayn karaan saacadaha maalintii xilliyada lagu jiro bisha ramadaan, cid soomana lama arki karo.” Sidaa waxa lagu yidho ogaysiis ka soo baxay Komishanka maamulka cuntooyinka iyo dawooyinka ee Gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ah oo ah degaanka muslimiinta ugu badan ku nool yihiin.
Waxa kaloo qoomiyaha muslimiinta lagu amray in aan laga dareemi karin wax muujinaya astaamo diineed, sida xijaabka lagu faral yeelay dumarka, gadhka raggu la baxo iyo afcaasha kale ee la xidhiidha cibaaddada Ilaahay loo sameeyo, iyadoo dadka muslimiinta ah ee Shiinuhu dhibaato ku qabaan sidii ay si xor ah ugu gudan lahaayeen cibaadada Ilaahay oo soonku ka mid yahay.
Dad badan oo muslimiin ah ayaa ka baxay dalka Shiinaha si ay si xor ah ugu cibaadaystaan Ilaahay, halka sidoo kale ay jirto jabhad hubaysan oo dagaal ugu jirta sidii ay gobolka muslimiintu ku nool yihiin uga madaxbannaanayn lahaayeen dalka Shiinaha.
“Ujeedada ugu weyn ee Shiinuhu ka leeyahay inuu joojiyo soonku waa inay qoomiyaha musliminta ah ee dalkiisa ka fogeeyaan dhaqanka iyo cibaadada wanaagsan ee bisha Ramadaan, laakiin siyaasadaha guracan ee noocaas ah waxa qudha oo ay sii xoojin karaan khilaafka iyo dhiig badan ku daato Shiinaha.” Sidaa waxa yidhi Afhayeen u hadlay Golaha Qoomiyada Uyghur oo ay ku midaysan yihiin aqoonyahan mustaafuris kaga maqan dalka Shiinaha.